वसन्त याममा ५०५ जनालाई हिमाल आरोहणको अनुमति
सगरमाथा लगायत विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि विभिन्न देशका ५०५ आरोहीले अनुमति पाएका छन्।
निम्स पुर्जा गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा
आठ हजार मिटरभन्दा माथिका सबै हिमालको सबैभन्दा छिटो अर्थात् १८९ दिनमा आरोहण गरेका निर्मल (निम्स) पुर्जालाई गिनिज वर्ल्ड रेकर्डले प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ।
नेपालमा के गर्दै छन् कीर्तिमानी आरोही राइनहोल्ड मेस्‍नर? मृत्यु र जीवनको दोसाँधबाट जुधेर आएका राइनहोल्ड मेस्‍नर अहिले ७७ वर्षको उमेरमा पर्वतारोहण कलाका दार्शनिक बनेका छन्।
सगरमाथाको सट्टा नौबन्धन? महाभारतमा चर्चा गरिएको समुद्र भनेको पूर्वसागर अर्थात् बङ्गालको खाडी हो र त्यहाँको हिमालयको चुचुरो भनेको पूर्वसागरसँग सम्बद्ध हिमचुली हो भन्ने स्पष्ट भए पनि अहिले ‘सगरमाथा’ भनी प्रसिद्ध हिमचुली नै ‘नौबन्धन’ हो भनी पत्याउने स्थितिमा हामी छैनौं।
शान्ति सेनाको शान
शान्ति मिसनमा सहभागिताको सार्थकता राष्ट्रिय हितका लागि आवश्यक ‘सफ्ट पावर’ सिर्जना गर्न सक्नुमा छ। त्यसैले, सरकारले आफ्नो क्षमता र दक्षता प्रयोग मार्फत शान्ति सेनालाई ‘सफ्ट पावर’ मा उपयोग गर्नुपर्छ।
जिमी रोबर्टस्, जसले ‘ट्रेकिङ’को न्वारन गरे
कर्णेल जिमी रोबर्टस्, जसले पहिलो पटक नेपालमा व्यावसायिक पर्वतीय पर्यटनको सम्भावना देखे।
सगरमाथामा मृत्यु भएका आरोहीको शव काठमाडौं ल्याइयो सगरमाथा आरोहणका क्रममा मृत्यु भएका स्वीस आरोही अब्दुल वारिचको शव काठमाडौं ल्याइएको छ।
सगरमाथामा मृत्यु भएका आरोहीको शव काठमाडौं ल्याइयो सगरमाथा आरोहणका क्रममा मृत्यु भएका एक जना आरोहीको शव दुई सातापछि काठमाडौं ल्याइएको छ।
तेञ्जिङ-हिलारीले काठमाडौं टेकेको त्यो दिन! त्यस घडीको एउटा अविस्मरणीय सम्झना बग्गीका अघि-अघि चार वटा घोडामा सवार भएका काठमाडौंका चार युवती थिए- इन्दिरा श्रेष्ठ, शान्ता श्रेष्ठ, कोकिला देवी र प्रभा श्रेष्ठ। बग्गीको अगुवाई गर्ने यी चार घोडसवार युवतीको चर्चा काठमाडौंमा धेरै समयसम्म छाएको थियो। सगरमाथाको त्यो विजय नेपालीहरूका लागि संसारै जितेको भन्दा ठूलो थियो।
झोमोलुङ्‌मा, सगरमाथा कि माउन्ट एभरेष्ट? अनेकौं हिमालको मौलिक नामकरण गर्न बाँकी नेपालले 'माउन्ट एभरेष्ट' को मौलिक नाम स्थापित गर्नेतर्फ सोच्न ढिलो गर्नुहुन्न।
कामिरितालाई काठमाडौंमा स्वागत (तस्वीरहरू) २५औं पटक सगरमाथा आरोहण गरेर कीर्तिमान कायम गरेका आरोही कामिरिता शेर्पालाई काठमाडौंमा स्वागत गरिएको छ।
१६ वर्षीय सोनाम सगरमाथाको चुचुरोमा ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिका-४ का १६ वर्षीय सोनाम शेर्पाले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन्।
भारतमा आएको चक्रवातले नेपालमा हिमाल आरोहण प्रभावित अरब सागरबाट उत्पत्ति भएको शक्तिशाली चक्रवात ‘टक्टे’को प्रभाव नेपालका हिमाल आरोहणमा पनि परेको छ। हिमाली क्षेत्रमा मौसम बिग्रिएपछि आरोहण रोकिएको छ।
चीनले रद्द गर्‍याे सगरमाथा आरोहण नेपालमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढेपछि चीनले उत्तरी मोहडाबाट वसन्त यामको सगरमाथा आरोहण रद्द गरेको छ।
सगरमाथा सफाइ गर्दा मानव कंकाल भेटियो
बहराइनका राजकुमार पुगे सगरमाथाको चुचुरोमा बहराइनका राजकुमार नासिर बिन हामिद अल खलिफासहितको आरोहण दलले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेको छ।
कामीरिताले तोडे आफ्नै विश्व कीर्तिमान, २५औं पटक सगरमाथा चुचुरोमा कामीरिता शेर्पाले २५औं पटक सगरमाथा आरोहण गर्दै आफ्नै विश्व कीर्तिमान तोडेका छन्।